Khabiirka Kala Duwan: Surefire Siyaabaha Looga Dhagayo Bogga Ka Hackers
Dadka intooda badan waxay u maleeyaan in websitekoodu aanu lahayn wax muhiim ah in la jabiyo. Websaydhku wuxuu noqon karaaoo ay ku kacday jabhad si ay u adeegsato server si ay u gudbiso spam ama u adeegsato sida server-ku-meel-gaar ah si loo helo waraaqo sharci-darro ah. Hackers bartilmaameedka shabakadakumbuyuutarrada macaamiishayda, waxay u shaqeeyaan sida botnets ama dalabaadka ransomware - equipment grain storage. Khasaaradu waxay isticmaalaan qoraallada tooska ah si ay jebiyaan internetka si ay isku dayaanIsticmaalidda dayacanka ee barnaamijka.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ay diyaarisay Igor Gamanenko, Sare Maareeyaha Guusha Guud, si aad u ilaaliso adiga iyo website-kaaga.
Software-ga casriga ah
Waa in si joogto ah loo cusbooneysiiyaa barnaamijka software-ka ee hawlaha iyo barnaamijyada taageerada.Dhibaato kasta oo ka jirta software-ka waxay siisaa kareemayaashu si sahlan ufilan si ay wax uga qabtaan oo u muujiyaan ujeedooyinkooda xun. Haddii shirkad martigalinaysa ay maamushoshabakadaada, ka dibna wax walwal ah ma laha sida shirkada martigelisa ay tahay in ay daryeesho nabadgelyada webka. Dhammaan codsiyada saddexaad waa inay ahaadaansi joogto ah loo cusbooneysiiyo si loo isticmaalo boogaha amniga cusub.
Hackers waxay isticmaalaan weerarrada cirbadaha si loo xakameeyo xogta website-ka. Isticmaalida heerkaTransact SQL waxay u sahlaysaa in aanad aqoon u lahayn codsiyada xaasidnimo ee su'aasha ah oo loo isticmaali karo in lagu dhajiyo miisaska ama tirtirto xogta. Kuiska ilaali tani, marwalba adeegso su'aalaha loo baahan yahay in lagu qiimeeyo sida kan hoos ku qoran:
$ stmt = $ pdo-> diyaariso ('SEELECT * FROM miiska WHERE column =: qiime');
$ stmt-> fulinta (array ('value' => $ parameter));
Qoraallada goobaha la buuxiyo
Maamulaha shabakada waa inuu ka taxaddaraa macluumaadka lagu soo bandhigay adigafariimaha khaladka ah. Kaliya waxay siiyaan khaladaad xadidan adiga oo isticmaalaya dadka isticmaala, si loo hubiyo in aysan bixinin xog qarsoodi ah oo ku saabsan serveradaada sidafuraha ereyada ama furayaasha API.
Aad bay muhiim u tahay in aad isticmaasho lambar sir ah si aad u heshid serverkaaga amabogagga shabakadaha ee maamulka. Isticmaalayaasha waa in sidoo kale lagu dhiirigeliyaa inay isticmaalaan furaha ereyada adag si ay u hubiyaan xisaabtooda. Isku-darka guud,jumlada, lambarrada iyo jilooyinka gaarka ah waxay ka koobanyihiin erey amaan ah. Caymisyada waa in lagu kaydiyaa iyadoo la isticmaalayo algorithm. WebsaydhAmniga waa la sii kordhi karaa adigoo isticmaalaya cusbo cusub oo cusbo ah oo sir ah.
Si looga hortago iskudayga jilicsan, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato inaad si toos ah u isticmaasho uploadedfaylasha. Fayl kasta oo lagu soo dhajiyay websaydhkaaga waa in lagu keydiyaa meel gaar ah oo ka baxsan Webroot. Qoraal kale waa inuu ahaadaaloo abuuray in la soo qaado faylasha ka yimid faylka gaarka loo leeyahay iyo iyaga oo u gudbiya tarja.
Waa nidaam, kaas oo bixiya ammaanka internetka. Waxay dammaanad qaadaysaa isticmaalayaashawaxay helayaan server-yada ay filayaan iyo in khawariistu aysan dhex galin karin waxyaabaha ay ka gudbayaan. Shabakad taageera deyntakaararka ama foomamka kale ee lacag bixinta waa inay isticmaalaan kukasyada dhabta ah ee loo diro codsi kasta oo user ah. Tani waxay kaa caawineysaa inaad xaqiijiso codsiyada sidaas oo kaleweerarrada fog.
Isticmaal qalabka amniga bogga
Marka aad samaysay dhammaan tallaabooyinka kor ku xusan, tijaabi ammaankaaga internetka waamuhiim ah. Waxaa ugu fiican in la isticmaalo qalabka tijaabooyinka lagu galo, oo ay ku jiraan Netsparker, OpenVAS, Headers.io iyo Xenotix XSSQaymeynta Qaabdhismeedka. Natiijooyinka isticmaalka qalabyada ayaa soo bandhigaya walaacyo badan oo suurtagal ah iyo xalal farsamo oo suurtagal ah.